Ibhulogi lika-Olga Steshkina Ibhulogi lika-Olga Steshkina
Ibhulogi lika-Olga Steshkina
Kungani udinga i-ganache? Kungani udinga i-ganache? 2021-10-23 19:00:04	Питание U-Olga Sologub Kungani uzinzisa i-ganache? Uma i-ganache ene-stratified ivunyelwe ukuzinza, khona-ke ngeke ibe nokuthungwa okubushelelezi, kodwa okusanhlamvu ngenxa yokungahlakazwa okwanele kwamafutha (izinhlayiya zamafutha nazo ... Funda
Impendulo esheshayo: Ingabe ngidinga ukukhipha uketshezi lapho ngifaka usawoti kuzinhlanzi ezibomvu? Impendulo esheshayo: Ingabe ngidinga ukukhipha uketshezi lapho ngifaka usawoti kuzinhlanzi ezibomvu? 2021-10-23 19:00:04	Питание U-Olga Sologub Ingabe ngidinga ukukhipha uketshezi lapho ngifaka usawoti izinhlanzi? Okubalulekile ukukhumbula: lapho inhlanzi ifakwe usawoti, ijusi ikhishwa ngezikhathi ezithile (lena ingxube kasawoti kanye noketshezi oluphuma ezinhlanzini), futhi ... Funda
Impendulo engcono kakhulu: Kuthatha amadigri amangaki ukuthosa iqanda? Impendulo engcono kakhulu: Kuthatha amadigri amangaki ukuthosa iqanda? 2021-10-23 19:00:04	Питание U-Olga Sologub Kufanele uwathose isikhathi esingakanani amaqanda? Thela amaqanda epanini elishisayo (gcina ipuleti liseduze nobuso bepani). Fry amaqanda ngomzuzu ongu-1 ngokushisa okuphezulu. Khona-ke umlilo ... Funda
Ngidinga ukwengeza amaqanda esinkwani? Ngidinga ukwengeza amaqanda esinkwani? 2021-10-23 19:00:04	Питание U-Olga Sologub Enzani amaqanda enhlama yemvubelo? Amaqanda engezwa ukuze kucebise inhlama ngamaprotheni namavithamini; izimpahla ezibhakiwe zinambitha futhi zinempilo. Ukuze ama-pie nama-buns ... Funda
Q: Kufanele ubhake nini iPhasika lika-2021? Q: Kufanele ubhake nini iPhasika lika-2021? 2021-10-23 19:00:04	Питание U-Olga Sologub Kufanele ubhake nini iPhasika? Ngokwesiko, kuyisiko ukubhaka i-paschi ngoLwesithathu, uLwesine Olukhulu nangoMgqibelo. Uma amakhekhe e-Easter abhakwe ngoLwesithathu ekwazi ukulahlekelwa ubusha bawo ngeholide ... Funda
Kungani ukuhlolwa kufanele kuvele kabili? Kungani ukuhlolwa kufanele kuvele kabili? 2021-10-23 19:00:04	Питание U-Olga Sologub Inhlama yemvubelo ingagaywa kangaki? Ngesikhathi sokuvutshelwa kwemvubelo inhlama, kufanele ichotshozwe okungenani kanye. Ukuxova inhlama kufeza izinhloso eziningi. Okokuqala, basusa ... Funda
Izindlela ezinhle kakhulu zokupheka
Izindlela zokupheka eziningi
Izimbambo zengulube ezosiwe
Ngiyanibingelela, ochwepheshe bami abathandekayo bezokupheka. Ngabe uyazithanda izimbambo ezigcotshwe kahle futhi ezigoqiwe noma ezibhakiwe kuhhavini? Nginodwa kuphela ... Funda
Ungazipheka kanjani izimbambo zengulube ebiwe ku-teriyaki marinade - iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo nesithombe 2017-11-13 12:07:25 Ukupheka
I-omelet ku-puff pastry kuhhavini Ungayipheka kanjani i-omelet yangempela ku-puff pastry kuhhavini ngebhulakufesi - iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo 2017-09-28 11:53:16 Ukupheka
Sanibonani, ama-gourmets ami amahle. Ake ungitshele, uyakuthanda ukudla okwenziwa kalula? Nganginothando olunjalo lokupheka okusheshayo lwazibonakalisa lapho indodana yami iqala ukuhamba. Funda
Amathanga enkukhu anewolintshi nelamula Ungawapheka kanjani amathanga enkukhu anewolintshi nelamula kuhhavini - iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo nesithombe 2017-09-15 12:08:35 Ukupheka
Sanibonani, bathandi bokuzijabulisa nezibiliboco. Ngicabanga ukuthi ngeke uphike ukuthi le nyoni ihamba kahle nezithelo namajikijolo. Yebo, isibonelo, isidlo sesiginesha sedili lomkhosi ... Funda
Ungayipheka kanjani i-ratatouille kahle Ungayipheka kanjani i-ratatouille kahle - iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo enezithombe zokunisela umlomo 2017-09-11 11:57:48 Ukupheka
Sanibonani abapheki bami abathandekayo. Muva nje ngibuke ikhathuni "Ratatouille". Indaba enhle yokuthi noma yini oyifunayo ingafezeka uma ungapheli amandla. Yiba nephupho -… Funda
Potato casserole noshizi Ukupheka i-casserole yamazambane amnandi noshizi - iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo nesithombe 2017-09-04 12:01:10 Ukupheka
Ngiyanibingelela, ochwepheshe bami abathandekayo bezokupheka. Ngabona ukuthi abangane bami abaningi bahlobanisa i-casserole ne-curd pie. Mhlawumbe ngoba i-cottage cheese casseroles icwile emphefumulweni, ethi ... Funda
Indlela yokwenza ama-corn tortillas?
Izindlela zokupheka ezinhle kakhulu ze-carrot casserole
Ungawukha kanjani unogwaja
Ungathosa kanjani imilenze yenkukhu kamnandi
Ungathosa kanjani inyama yenkomo epanini
Ukudla okungu-60 - imenyu yesonto
Indlela yokwehlisa isisindo evumela ukuthi ungabulawa yindlala. Ukudla kususe ama-60 ...
Ukudla kukaDucan - Isiteji sokuhlasela
Ukudla Okudumile kweDucan Attack - Imikhiqizo evunyelwe kanye ...
Abadli bokudla abaziwayo emhlabeni
Abadli bokudla abaziwa kakhulu emhlabeni babelana ngokuvela kwabo ...
Ukudla kwamaDukan - izigaba namamenyu
Uyini umongo wokudla kwamaDukan, oku ...
Yini okufanele uyipheke ku-blender?
Namuhla ekhishini ungathola inqwaba yamathuluzi awusizo.
Okuningi ngokudla okunomsoco
Q: Kufanele ubhake nini iPhasika lika-2021? Q: Kufanele ubhake nini iPhasika lika-2021? 2021-10-23 19:00:04 Питание U-Olga Sologub Kufanele ubhake nini iPhasika? Ngokwesiko, kuyisiko ukubhaka i-paschi ngoLwesithathu, uLwesine Olukhulu nangoMgqibelo. Uma amakhekhe e-Easter abhakwe ngoLwesithathu ekwazi ukulahlekelwa ubusha bawo ngeholide ... Funda
Umbuzo wakho: Ungagcina kanjani i-sauce ye-balsamic? Umbuzo wakho: Ungagcina kanjani i-sauce ye-balsamic? 2021-10-23 19:00:04 Питание U-Olga Sologub Indlela yokugcina ukhilimu we-balsamic? Gcina emazingeni okushisa asuka ku -5'C kuya ku-30'C kanye nomswakama ohlobene no-75%. Gcina ibhodlela esiqandisini ngemva kokuvula. Ungawugcina kanjani uviniga obhalsamu ... Funda
Kungani udinga i-ganache? Kungani udinga i-ganache? 2021-10-23 19:00:04 Питание U-Olga Sologub Kungani uzinzisa i-ganache? Uma i-ganache ene-stratified ivunyelwe ukuzinza, khona-ke ngeke ibe nokuthungwa okubushelelezi, kodwa okusanhlamvu ngenxa yokungahlakazwa okwanele kwamafutha (izinhlayiya zamafutha nazo ... Funda
Impendulo engcono kakhulu: Kuthatha amadigri amangaki ukuthosa iqanda? Impendulo engcono kakhulu: Kuthatha amadigri amangaki ukuthosa iqanda? 2021-10-23 19:00:04 Питание U-Olga Sologub Kufanele uwathose isikhathi esingakanani amaqanda? Thela amaqanda epanini elishisayo (gcina ipuleti liseduze nobuso bepani). Fry amaqanda ngomzuzu ongu-1 ngokushisa okuphezulu. Khona-ke umlilo ... Funda
Kungani ukuhlolwa kufanele kuvele kabili? Kungani ukuhlolwa kufanele kuvele kabili? 2021-10-23 19:00:04 Питание U-Olga Sologub Inhlama yemvubelo ingagaywa kangaki? Ngesikhathi sokuvutshelwa kwemvubelo inhlama, kufanele ichotshozwe okungenani kanye. Ukuxova inhlama kufeza izinhloso eziningi. Okokuqala, basusa ... Funda
Impendulo esheshayo: Ingabe ngidinga ukukhipha uketshezi lapho ngifaka usawoti kuzinhlanzi ezibomvu? Impendulo esheshayo: Ingabe ngidinga ukukhipha uketshezi lapho ngifaka usawoti kuzinhlanzi ezibomvu? 2021-10-23 19:00:04 Питание U-Olga Sologub Ingabe ngidinga ukukhipha uketshezi lapho ngifaka usawoti izinhlanzi? Okubalulekile ukukhumbula: lapho inhlanzi ifakwe usawoti, ijusi ikhishwa ngezikhathi ezithile (lena ingxube kasawoti kanye noketshezi oluphuma ezinhlanzini), futhi ... Funda
Okuningi mayelana nokudla
Yonke into owake wafuna ukuyibuza ngokudla kukaMaggi Konke owake wakufuna ukubuza ngokudla kukaMaggi - izimpendulo zemibuzo ebuzwa njalo 2018-10-23 14:30:07 indlela yokudla ehambisana nempilo U-Olga Sologub Iqoqo lemibuzo ejwayelekile kakhulu mayelana nama-nuances we-Maggi Diet. Ungaphinda kaningi kangakanani, ukuthi wenzeni uma isisindo simile, yini okufanele uyenze uma umbuso wephulwa, ubungakanani besabelo, okufanele ukwenze uma uqunjelwa. Imifino nezithelo ezivunyelwe, ungawashintsha kanjani amaqanda, yiziphi izinhlanzi okufanele uzidle nokuthi utshwala newayini kuvunyelwe yini. Funda
Yikuphi ukudla okhuthaza ukunciphisa umzimba Yikuphi ukudla okuzosiza ukusheshisa imetabolism, kushise amanoni futhi kukhuthaze ukwehla kwesisindo? 2017-12-17 21:18:32 indlela yokudla ehambisana nempilo U-Olga Sologub Ukuze isisindo esiningi siphume ngokushesha, udinga ukudla ukudla okusheshisa imetabolism emzimbeni womuntu. Yiziphi ezizosiza ngalokhu? Ungathola uhlu lwezinto ezinhle kakhulu kule ndatshana. Amasobho anekhalori eliphansi, okusanhlamvu nemifino kuhle ukunciphisa isisindo ngokushesha. Amakhambi njengezinongo nawo ahlukanisa ukudla - ashisa amanoni futhi akhuthaze ukwehla kwesisindo, ikakhulukazi esiswini nasezinhlangothini. Funda
Nciphisa isisindo nge-ginger oqoshiwe Ungasinciphisa kanjani isisindo ngokufanele: ingabe i-ginger eqoshiwe ilungele ukwehla kwesisindo? 2017-11-01 11:59:14 indlela yokudla ehambisana nempilo U-Olga Sologub Ukhathele ukulwa nokukhuluphala? Zama ujinja okhethiwe ukuze unciphise isisindo. Kulesi sihloko, siqoqe amathiphu awusizo wokuthi ungayithatha kanjani i-ginger, mangaki amagremu ngosuku, mangaki alahlwayo, uma esetshenziswa kahle. Kanye neresiphi ewusizo ye-ginger oqoshiwe ekhaya, izinzuzo nokulimala komkhiqizo. Funda
Okudingayo ukuze udle ukunciphisa umzimba Ukudla okunomsoco nokuzivocavoca umzimba kuyisihluthulelo sokuba mncane. Yini okudingeka uyidle ukuze unciphise isisindo? 2017-10-27 11:44:46 indlela yokudla ehambisana nempilo U-Olga Sologub Isisindo eseqile yinkinga ekudala ikhona emphakathini wanamuhla. Ekulweni nayo, ukuvivinya umzimba nokubala ikhalori kuyasiza. Kule ndatshana, uzofunda ngokuthi yini okudingeka uyidle ukuze unciphise isisindo, ukuthi yikuphi ukudla okufanele ukhethe, nokuthi ukuze uthole imiphumela engcono udinga ukuzivocavoca umzimba njalo, uhambe kakhulu, futhi ugijime kangcono. Funda
Ibhulakufesi lesibili lokwehlisa isisindo Ingabe "ibhulakufesi lesibili" liyisikhali esiyimfihlo sokwehlisa isisindo? 2017-10-14 11:57:27 indlela yokudla ehambisana nempilo U-Olga Sologub Abantu abaningi baphikisa ngokuthi isidlo sasekuseni esimnandi siyisihluthulelo sosuku oluyimpumelelo. Noma kunjalo, akunjalo. Kungcono ukuhlukanisa isidlo sakho sasekuseni phakathi. Ngale ndlela uthola inani elingaphezulu. Funda
Yini esongela ukukala njalo Ziyini izingozi zokukalwa njalo nokuthi ungathola kanjani ukujwayela okuphelele 2017-10-12 11:58:59 indlela yokudla ehambisana nempilo U-Olga Sologub Abantu abaningi babheka isisindo sabo. Kepha abanye abantu bakhathazeka kakhulu ngalokhu. Ungayithola kanjani incazelo yegolide? Kulula kakhulu ukuthola ukukhathazeka ngokubheka esikalini Funda
Okuningi mayelana nobuncane
Ukuzivocavoca kweKegel kwabesifazane Ungakwenza kanjani kahle ukuzivocavoca kweKegel kwabesifazane ekhaya? 2018-04-02 11:56:23 Ukuzaca U-Olga Sologub Ukuzivocavoca kwe-Kegel noma kwesitho sangasese sowesifazane kungukuzivocavoca okuzuzisa kakhulu. Kulesi sihloko uzofunda ukuthi kuyini, inqubo yokuthi ungayenza kanjani imithambo yokuzivocavoca efanelekile kwabesifazane ekhaya, kukhona yini ukuphikisana kwama-hemorrhoids kanye ne-cystitis, okungenzeka ukwenze ngesikhathi sokuya esikhathini. Kanye nesethi yesinyathelo ngesinyathelo yezifundo zabaqalayo nokuzivocavoca ngamabhola. Funda
Ukuzivocavoca kukaKegel kwabesifazane abakhulelwe Ungakwenza kanjani kahle ukuzivocavoca kweKegel kwabesifazane abakhulelwe futhi ngabe kukhona yini ukuphikisana kubo? 2018-03-30 11:56:22 Ukuzaca U-Olga Sologub Ukuzivocavoca umzimba okubandakanya izivivinyo zeKegel kunenzuzo kwabesifazane abakhulelwe kuze kube amasonto angama-40. Kungcono ukuqala ukwenza izivivinyo ku-1 trimester, kepha izinzuzo zizobonakala ku-2 no-3. Esihlokweni uzothola imininingwane yokuthi ungayenza kanjani i-gymnastics ekhaya, ukubuyekezwa nokuphikisana. Funda
UKegel Ball Gymnastics Ukuzivocavoca umzimba okusondelene namabhola weKegel: kuyini nokuthi ungakusebenzisa kanjani kahle 2018-03-28 12:14:18 Ukuzaca U-Olga Sologub Ukuqinisa imisipha yesitho sangasese sowesifazane kungenzeka nasemakhaya. Ngalokhu udinga amaqanda noma amabhola weKegel. Ungayisebenzisa kanjani i-simulator enjalo? Ake sibheke ukuthi ziyini, zenzelwe ini nokuthi zenziwa kanjani izivivinyo. Kulesi sihloko, uzothola imiyalo yokuthi ungawasebenzisa kanjani amabhola, amathiphu wokuthi ungabakhetha kanjani osayizi babaqalayo, ukuthi bangafakwa kanjani nokuthi basebenza kanjani. Funda
Ukuphefumula umzimba Imizuzu engu-15 ngosuku yomzimba omncane - izivivinyo zokuphefumula zokwehlisa isisu 2018-03-09 11:58:03 Ukuzaca U-Olga Sologub Ukuvivinya imizuzu engu-15 ngosuku kungaholela emiphumeleni emihle. Kwanele ukwenza izivivinyo zokuphefumula ukuze unciphise isisu esiswini. Kwenzenjani? Esihlokweni uzothola incazelo yomzimba kaMarina Korpan, i-gymnastics kaStrelnikova, i-jianfei yabaqalayo kanye namakilasi ngokohlelo lwaseJapan. Ungafunda futhi izibuyekezo futhi ubuke ividiyo ekhombisa izisekelo zokuzivocavoca ngemizuzu eyi-8 nje. Funda
Ukuzivocavoca KweBelly Slimming Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yikuphi ukuvivinya umzimba okwehlisa isisu esiswini, ezinhlangothini nasezinqeni okusebenza kakhulu? 2018-03-07 11:58:05 Ukuzaca U-Olga Sologub Ukuzivocavoca kungenziwa hhayi kuphela ejimini, kepha nasekhaya, ukuhlala esihlalweni. Kulesi sihloko, kukhethwa ukusebenza ngempumelelo kwabesilisa nabesifazane - ku-fitball, bodyflex breathing complex, static bar nabanye. Ukuzivocavoca kwe-Dumbbell kokunciphisa isisu nezinhlangothi, okhalweni, izinqe nezingalo. Funda
Iyini imishini kaKegel? Benzelwe ini abaqeqeshi beKegel? Isimiso sokusebenza nemiyalo yokusetshenziswa 2018-03-06 11:56:56 Ukuzaca U-Olga Sologub Kwabesifazane, ukuqinisa imisipha ye-pelvic kungenzeka ngosizo lwe-Kegel simulators. Kuyini, ungawasebenzisa kanjani amabhola futhi kukhona yini ukuphikisana - funda kulesi sihloko. Kanye nokubuyekezwa kodokotela, ukuthi ungakhetha kanjani nokuthi ungathenga kuphi ukubhucunga okunjalo, kungenzeka yini ukukwenza ngokwakho ekhaya kanye nencazelo yamamodeli athandwa kakhulu - iMagic Kegel Master neKGoal. Funda
Yini i-primer yobuso I-Face primer: iyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani + isilinganiso semikhiqizo ehamba phambili 2019-01-24 15:59:02 Красота U-Olga Sologub Ntambama, bafundi be-blog abathandekayo! Uyazi ukuthi yini into yokuqala ubuso? Labo abalandela izeluleko zabadwebi bezimonyo zobuchwepheshe sekuyisikhathi eside befaka lo mkhiqizo esikhwameni sabo sezimonyo. Futhi hhayi ... Funda
Izinzuzo ze-hyaluronic acid ebusweni Ziyini izinzuzo ze-hyaluronic acid ebusweni: ukusetshenziswa ku-cosmetology nasekhaya 2018-08-29 09:21:57 Красота U-Olga Sologub Yini i-hyaluronic acid ebusweni? Ake sithole ukuthi kungani kudingeka ukugcwaliswa okusekwe kwi-hyaluronic, ukusebenzisa ukhilimu kanye ne-serum ekhaya, ukusetshenziswa kwemijovo, i-mesotherapy kanye ne-biorevitalization yemibimbi, izindebe nezindwangu ze-nasolabial ku-cosmetology. Izimo ngesikhathi sokukhulelwa futhi kungenzeka yini ukubhoboza ehlobo. Ukubuyekezwa kwenqubo nezithombe ngaphambi nangemva. Funda
Luyini ukwelashwa kwe-ozone ebusweni Luyini ukwelashwa kwe-ozone ebusweni futhi ibiza malini inkambo yokwelashwa kwesikhumba? 2018-08-24 14:21:54 Красота U-Olga Sologub Umphumela ozuzisayo we-ozone esikhumbeni kudala usetshenziswa ku-cosmetology. Kule ndatshana uzofunda ukuthi yini ukwelashwa kwe-ozone kobuso obunesithombe ngaphambi nangemva, intengo yayo, ukuthi kusiza kanjani ekwelapheni izinduna, izinduna, i-rosacea, ne-oval yobuso nentamo. Yikuphi ukuphikisana, imiphumela kanye nezinkinga. Kungenzeka ukuyisebenzisa ekhaya nangesikhathi sokukhulelwa, inkokhelo yezinqubo ibiza malini? Funda
I-Bronzer yobuso nomzimba Yini i-bronzer yobuso nomzimba we: ukuthi iyini kanye nohlelo lwesinyathelo ngesinyathelo sokusetshenziswa kwayo 2018-08-20 14:05:12 Красота U-Olga Sologub Isikhumba esikhanyayo iphupho lawo wonke amantombazane. Kule ndatshana uzofunda ukuthi i-bronzer yobuso nomzimba iyini, yenzelwe ini, umdwebo wesinyathelo ngesinyathelo ezithombeni zendlela yokuwusebenzisa nokuwusebenzisa kahle nge-highlighter, ukuthi ungawukhetha kanjani umkhiqizo wesikhumba esikhanyayo , yikuphi okungcono ukuthenga - i-powder noma i-liquid, ukubuyekezwa ngezithombe ngaphambi nangemva mayelana nemikhiqizo uClarence, Mac, Dior, Letual nabanye. Funda
Kusho ukunciphisa izimbotshana Ukubuyekezwa kwezimonyo ezihamba phambili namakhambi wesintu kuma-pores amancane ebusweni 2018-04-01 12:17:03 Красота U-Olga Sologub Lapho ukhetha ikhambi elihle lokunciphisa izimbotshana ebusweni, udinga ukwazi ukuthi ungathenga amalungiselelo asebenzayo okwenziwa kwemithi noma ulungiselele imaski enhle yabantu ekhaya. Kungaba ukhilimu, ubumba lwezimonyo noma izifihla-buso ezine-aspirin, amazambane nolamula, noma uju. Funda kabanzi ku-athikili, lapho uzothola khona ukubuyekezwa namanani entengo yezimonyo. Funda
Kuyini ukugqamisa ubuso Yini i-face highlighter nokuthi ungayisebenzisa kanjani: ukufunda ukukhetha umbala futhi uwusebenzise kahle 2018-03-31 12:18:51 Красота U-Olga Sologub Awungeke uthole ukwakheka okuhle ngaphandle kwesikhanyisi. Ake sithole ukuthi kuyini nokuthi singayisebenzisa kanjani kahle! Esihlokweni uzothola uhlelo lwezinyathelo ngezinyathelo lokuthi ungafaka kanjani isicelo kubuso obuyindilinga, ukubuyekezwa ukuthi yikuphi okungcono ukuthenga esitolo se-inthanethi, amanani nezilinganiso zezinto ezinhle kakhulu, izithombe ngaphambi nangemva kokufaka isicelo, amathiphu indlela yokukhetha umthunzi oyifunayo. Funda
Sawubona, igama lami ngingu-Olga. Ufuna izindlela zokupheka ezinempilo zobuhle nezempilo? Ngemuva kwalokho wamukelekile kubhulogi lami. Okuningi ngami
© 1983-2020 Ibhulogi lika-Olga Steshkina Ukukopishwa kwendaba kukhuthazwa kuphela uma kukhona isixhumanisi esisebenzayo ku i-takioki.impilo
Shintsha izilungiselelo zobumfihlo